Chishanu 22 Mbudzi 2019
Kukadzi 18, 2019
Hurukuro neMuimbi Rise Kagona Akavamba Chikwata cheBhundu Boys
Muimbi Rise Kagona anotaura zvenhoroondo yake munyaya dzemagitare uye kushanda nemuimbi, mushakabvu Biggie Tembo.
Gunyana 25, 2018
Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri muAmerica ne Canada Zvosangana naVaMnangagwa kuNewYork
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica ne Canada zvakasangana nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa pamusangano wakaitwa muNewYork neSvondo. VaMnangagwa vari muNew York uko varikupinda mumusangano weUnited Nations General Assembly.
Vamwe Vatsigiri veBato reMDC Vari muAmerica Voratidzira Panze Pemusangano waVaMnangagwa muNew York
Vamwe vatsigiri vebato reMDC vari muAmerica vakaratidzira panze pemusangano wakaitwa nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa muNew York nemusi weSvondo vachiti havava cherechedze semutungamiri wenyika. Kunyangwe zvazvo vange vari vashoma vatsigiri ava vonoti vakafadzwa nekuratidzira kwavakaita.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuAmerica neku Canada zvakasangana nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, kuNewYork nemusi weSvondo pamusangano wekutaura nezvehwaro hwavo nevanogara kunze kwenyika.
Gunyana 18, 2018
Nhengo dzeMDC Dzinobuda muParamende Dzichiratidzira
Nhengo dzeMDC dzinobuda muparamende dzichiratidzira dzichiti hadziremekedzi VaMnangagwa semutungamiri wenyika dzichiti mutungamiri wadzo, VaNelson Chamisa, ndivo vakasarudzwa semutungamiri wenyika kunynage hazvo dare reConstitutional Court rakati VaMnangagwa ndivo vakasarudzwa zviri pamutemo.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols Votaura nezve Hwaro Hwavo seMumiriri Mutsva
Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vanoti nyika yavo iri kuedza nepaigona napo kubatsira Zimbabwe munyaya dzehutano. Vachitaura naMarvellous Mhlanga-Nyahuye weVoice Of America - Studio7 muWashington neChishanu, Ambassador Nichols vvakataurawo pamusoro pezvirango zvehupfumi.
Gunyana 17, 2018
Vatsigiri veBato reZanu PF Votamba Pamabiko eGurukota reDunhu reMasvingo VaEzra Chadzamira
Vatsigiri veBato reZanu PF Votamba Pamabiko eGurukota reDunhu reMasvingo VaEzra Chadzamira. Nyaya ina Gandri Maramba.
Vatsigiri veBato reZanu PF Votamba Vachifarira Gurukota reDunhu reMasvingo, VaEzra Chadzamira
Gurukota redunhu reMasvingo, VaEzra Chadzamira, vakavimbisa kupedza hurombo muvanhu vachiti vachashanda zvakasimba kuburikidza nechirongwa chehurumende chekuendesa mamwe masimba kumatunhu vachiti izvi zvichaita kuti hupfumi hwedunhu hubetsere vagari.
Gunyana 13, 2018
Gweta raDoctor Parirenyatwa VaJames Makiya Vachitaura nezve Mhosva Yavari Kupomerwa
Gweta raDoctor David Parirenyatwa VaJames Makiya vachitaura nezve mhosva yevaimbove gurukota rezvehutano Doctor Parirenyatwa vambosungwa vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri pamwero hurumende ichiti vakaita huori pamabatiro avakaita nyaya yemushandi wekambani yeNatpharm.
Vaimbove Gurukota rezveHutano Doctor David Parirenyatwa Vachiburitswa muHusungwa
Vaimbove gurukota rezvehutano, Doctor David Parirenyatwa, vambosungwa vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri pamwero hurumende ichiti vakaita huori pamabatiro avakaita nyaya yemushandi wekambani yehurumende yeNatpharm. Nyaya ina Thomas Chiripasi.
Gunyana 11, 2018
VaJefferson Chitando Votaura nezve Kusiya Bato reNPP Vachienda kuMDC
Vaiwona nezvekufambiswa kwamashoko mubato re NPP VaJefferson Chitando vachitaura pamusoro pekusiya bato ravo. Nyaya ina Gandri Maramba.
Gunyana 10, 2018
Mutevedzeri weGurukota reMatunhu Amai Jennifer Mhlanga Vanoti Vari Kufadzwa neKuwanda kweMadzimai muKabineti
Amai Jennifer Mhlanga mutevedzeri wegurukota rematunhu vachitaura mushure mekutoreswa mhiko nhasi. Makurukota akasarudzwa svondo rapera nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa otora mhiko nhasi kuState House.